Maitiro Ekuratidza Kunzwa Kwako Mumashoko - Pfungwa
Vanoda unzwe wakasununguka kutaura zvaunonzwa? Iyi ndiyo yakanakisa $ 14.95 yauchamboshandisa.
Wakambozviwana usisakwanise kuwana mazwi ekutaura manzwiro aunoita chaizvo?
Wakambove usina chokwadi chaizvo zvauri kunzwa here?
Ehe, iko kudiwa kwekuzviratidza pachako kwakaberekwa muvanhu.
Hupenyu hwakaoma uye hunounza nezvose zvakanaka uye zvinotyisa zviitiko. Zvinoitika izvo zvatiinazvo zvinoumba nyika yedu, hunhu hwedu, maitiro atinoona zvinhu, nzira yatinoita nayo vanhu, kuvimba kwatinoita, uye maitiro atinoita.
Iko kugona kuratidza kwako manzwiro uye manzwiro mumashoko kwakakosha kuti uzviite unzwisiswe.
Mushure mezvose, kune vanhu vanopfuura mabhiriyoni manomwe pasi rino. Ndiwo mabirioni manomwe maonero akasiyana akaumbwa nezviitiko uye kudyidzana kwevanhu ivavo.
Kuratidza manzwiro ako kuburikidza nemazwi kwakakosha kuvaka mabhiriji nevamwe vanhu, vangave vari vausingazive vachichinja kuita shamwari, kusimbisa zvisungo zverudo, kana kufamba nenyika pamwe nemhuri, shamwari, kana vamwe vadikanwa.
Kugona kutaura manzwiro ako kwakakoshawo kuti uzvinzwisise uye nemabatiro aunoita nenyika. Zviri nyore kwazvo kuziva simba, kushaya simba , kana matambudziko angangoitika kana iwe uchigona kuisa mazwi kune ako manzwiro.
Unoita sei nezvekuita izvozvo?
1. Gadzira nharaunda kwaunogona funga zvakadzama uye kugadzirisa ruzivo.
Kune dzimwe nharaunda umo iwe uchave uine nguva yakaoma kuita chero yemhando yekufungisisa.
Saka, chekutanga, tsvaga kana gadzira nzvimbo yako pachako kwaunogona kugara nepfungwa dzako uye kugadzirisa chero chauri kuyedza kushandira.
Chii chinogadzira nharaunda yakanaka yekufunga zvinogona kureva zvinhu zvakasiyana kuvanhu vakasiyana. Vamwe vanhu vanosarudza runyararo uye kunyarara, vamwe vanosarudza rumwe rudzi rwemuchena ruzha kana kunyangwe mimhanzi.
Izvo zvinobatsirawo kana nharaunda yako ichikwanisa kukuisa munzvimbo yakakodzera yepfungwa kuti unzwe iwo manzwiro auri kuedza kuratidza.
Chinyorwa chekunyora icho chingakubatsire iwe kupinda munzvimbo yakakodzera yepfungwa ndechekuisa mahedhifoni uye teerera kumimhanzi inoratidza mhando yemanzwiro auri kuedza kunyora nezvazvo.
Kana chiri chinhu chinosuwisa, teerera kumimhanzi inosuruvarisa. Kana chiri chimwe chinhu chakatsamwa, teerera kumumhanzi wehasha. Mahedhifoni akakosha nekuti anozonyudza zvimwe zvinokanganisa zvinogona kunge zviri padhuze newe uye zvinokanganisa njanji yako yekufunga.
Kuteerera kune imwe rwiyo iwe yaunonyatsoziva pane chiuno kunogona zvakare kubatsira. Sezvo iwe uchitoziva mazwi erwiyo, unogona zone kumumhanzi uye kusunungura pfungwa dzako kubva kunyatsofunga nezve izvo zvauri kuteerera. Izvi zvinopa yako yekufunga pfungwa yakawanda nzvimbo yekuita uye kuyerera.
2. Shingairira kunyora pachena nepeni uye notepad.
Kunyora kwemahara chiitiko chinoshandiswa nevanyori kubatsira kukurira kusava nechokwadi , kusava nehanya, uye munyori block.
Chaizvoizvo, munyori anongogara pasi otanga kunyora chero chinhu nezvose zvinouya mupfungwa, achirega pfungwa dzavo dzichienda kwadzinoda pane kuyedza kuityaira neimwe nzira inoenda kunzvimbo yekongiri.
Izvo zvinopa munyori mukana wekupururudza chero cobwebs uye kuti zviwane jisi rekugadzira richiyerera pasina kunetseka nezvehunyanzvi kukwana.
Iwe haunetseke nezve grama, chimiro, kana kunyangwe kunyora mitsara yakazara kana pfungwa kana uchinyora wakasununguka.
Tichachinja maitiro aya zvishoma zvishoma nekuda kwekuratidza manzwiro edu.
Panzvimbo pekurega pfungwa dzako dzichienda chero kwadzinoda kuenda, edza kuzvitungamira mugwara rezvose zvauri kunzwa uye nyora zvese pasi zvinouya kwauri.
Nenzira iyo iwe unenge uine tarisiro peji kana maviri eakakodzera ruzivo iwe aunogona kugadzirisa kuburikidza kuti unatsiridze zvauri kuyedza kuratidza.
Pane dzimwe nguva apo mazwi acho akaoma kuwana kupfuura mamwe. Ive neshuwa yekuzvipa iwe inokwana awa kuti ugare pasi, gadzirisa pfungwa dzako, uye ushande.
Iwe unofanirwa kunge uri kushandisa chinyoreso uye bepa pachiitwa ichi. Chiito chekunyora panyama chinononoka uye zvakanyanya nemaune pane kutaipa. Ichakumanikidza kuti ufunge nezve mataurirwo emashoko ako sezvaunonyora nenzira inosiyana nekutaipa.
Journaling inofanirawo kuitwa nepeni nepepa nekuda kwezvikonzero zvakafanana.
Maitiro Ekutaurira Mumwe Munhu Waunovada Pasina Izvo Zvisinganetse
3. Shandisa zvawakanyora kuratidza zvaunoda kutaura muchirevo chimwe chete.
Basa rekutaura manzwiro ako rinotanga nekutsvaga kuti chii chinobva manzwiro iwayo.
Iwe unoda kuswedera padyo nemudzi wenyaya sezvaunogona uye kugona kuitaura muchimiro chemutongo mumwe.
Sei chirevo chimwe chete?
Chinangwa ndechekujekesa kuti dambudziko nderei chaizvo kuti rinyatso ziviswa kune chero vateereri - kana kunyange iwe pachako kana usinga farire kutaura zvinonzwika nezvazvo.
Iwe unofanirwa kuve nehunhu chunk yeruzivo rwakatenderedza manzwiro auri kuyedza kuratidza. Tarisa pane zvawakasununguka kunyora uye edza kuona iwo mudzi wemanzwiro.
Semuenzaniso, kana iwe uri mukurairana nekuda kwematambudziko ehukama, kungotaura kuti une hukama hwehukama hazvisi izvo zvese zvakajeka. Zvinoda kumwe kunatsiridzwa kuti usvike pamudzi wedambudziko kuti zvigadziriswe.
Kune rimwe divi, kana uchikwanisa kushandira pasi, ' Ini handinzwe sekunge ndinogona kuvimba newangu wandinoshanda naye , ”Iwe unobva uine nzvimbo ipfupi yekutanga kutsvaga chinokonzeresa uye mhinduro yenyaya iyoyo.
Mukurondedzera mutongo uyu kune ani zvake vateereri vari, unogona kuona kuti vane maonero akasiyana ezviitiko kana manzwiro nezve chero chii chakaitika. Izvo zvinokutendera iwe kuti uwane yaunowirirana uye wotanga kushanda kuburikidza chero ingave iri nyaya ingave iri.
4. Ongorora mamiriro akazara uye uone kana izvo zvaunoda kutaura zvinofanirwa kutaurwa.
Kune vanhu vazhinji kunze uko vanochema kuti iwe utaure chokwadi chako, kwete kudzora, uye kuve nechokwadi chekuti izwi rako rinonzwika.
Kazhinji kutaura, iro harisi zano rinotyisa. Nekudaro, kune mapako.
Ngatitii, semuenzaniso, Amy anobva kumhuri isingashandi. Amai nababa havazi vanhu vakuru, hama chepfu .
Amy anoziva kuti chimwe chinhu chakakanganisika zvakanyanya nemhuri yake zvine simba uye anoziva kuti huturu hwavo uye kusagadzikana zvinogona kuita chikonzero chekushushikana uye kushungurudzika.
Anogona kusarudza kuenda kurapi kuti agadzirise izvi, azvione sedambudziko, uye angasarudza kupokana nenyaya iyi.
Asi, kutaura izvi zvakazarurwa kuchamubatsira kana kumukuvadza here? Chii chaanowana kuti awane kubva mukuita saizvozvo?
Zvakatoipisisa, kana iye aine nhengo dzemhuri dzinonyengera, ivo vanogona kushandisa yake ega manzwiro sechombo kwaari.
Anogona pakupedzisira kusarudza mira wega , uye a mubereki anonyengera anogona kushandura izvo kuti amupende se 'asingaongi zvibayiro zvedu' uye ozvishandisa sechiyero kukurudzira pfungwa dzevamwe vemhuri kana shamwari.
Kutsvaga nzira yekuzviratidza uye kutaura zvaunofanira kutaura zvakanaka uye zvine hutano, asi dzimwe nguva ruzivo irworwo rwakanyanya kusiiwa mumusoro mako kana muchivimbo chehofisi yevanopa mazano ehutano hwepfungwa uko isingazoshandiswa sechombo kurwisa iwe.
Chaizvoizvo tora nguva kuti uongorore zvaunomira kuti uwane nekuburitsa zvaunonzwa, nekuti kune vanhu vazhinji pasi pano vanozongoona icho seutera hwekushandisa nekushandisa.
Dzimwe nguva zvirinani kuramba wakanyarara kuitira kuti vanhu vane chepfu vasakwanise kushandisa zvaunokanganisa uye nenjodzi kwauri.
Tinoda kufunga kuti Amy anga ari pachinzvimbo apo vanhu vakamukomberedza vane hanya uye vachida kushandira kugadziriso yakatenderedza manzwiro iwayo kana ivo vachibatanidzwa, asi izvo hazvisi izvo nguva dzose.
Vamwe vanhu vane hutsinye uye vasina hunhu uye handina basa nekuti maitiro avo anokanganisa sei vamwe uye havaone chikonzero chekuchinja maitiro avo kana maonero.
Muchidimbu, nenzira dzose shandisa zviitwa zviri muchinyorwa chino kuti ubatsire kuisa zvaunonzwa mumashoko. Izvo zviri kwauri kuti iwe unogovana izvi nevamwe uye, kana uchidaro, ndiani waunogovana naye.
kangani vanobiridzira vachibiridzira zvakare
Kugona kunzwisisa uye kuratidza manzwiro ako chinhu chakakosha mukudoma nzira dzekugadzirisa nadzo (uchifunga kuti vari kukunetsa neimwe nzira).
Saka gadzira nharaunda yakakwana kuti uongorore manzwiro ako, uye shandisa mimhanzi uye kunyora kuti uone pane chaiwo zvinhu zvaunoshuvira kujekesa mupfungwa dzako. Wobva wasarudza kuti unoshuvira here kugovana zviwanikwa zvako nenyika uye kuti ungaita sei nezvazvo.
Kufungisisa kwakatungamirwa uku kunogona kukubatsira here taura zvaunonzwa zviri nyore ? Tinofunga kudaro.
unoziva sei kana mumwe munhu achikuitira godo
sei kumira kutiza matambudziko ako
nhetembo dzemudiwa akashaya
zviratidzo anoda chete kurara newe
zvekuita kana wako uchidanana nevakomana vaviri
tsanangura kuva murudo nemumwe munhu
kuwana rukudzo kubva kumurume